यस्तो देखिने परिचित र सरल स्वच्छता विशेषता, टूथपेस्ट जस्तै - ध्यान चयन औषधीय तत्व र सूक्ष्मजीवीरोधी एजेन्टहरु को एक विशेष मिश्रण। , उपचार दाँत र गिजा तामचीनी Polishes, सास freshens, उपयोगी घटक को कमी को लागि क्षतिपूर्ति गर्न मद्दत गर्छ: को सफाई कार्य गर्न साथै, यो अन्य सञ्चालनका एक नम्बर कार्य गर्दछ।
अक्सर, धेरै खरीदारों यसको लागत आधारमा टूथपेस्ट चयन गर्नुहोस्, वा होनहार विज्ञापन भरोसा। यो दृष्टिकोण मौलिक गलत छ। तपाईं यस्तो उत्पादन किन्न अघि, तपाईं ध्यान दिएर यसको सामग्रीहरू, साथै आधारभूत कार्यहरु, यसको विविधता आधारमा ध्यान केन्द्रित गर्न हो जो जाँच गर्नुपर्छ।
"Lakalyut" - एउटै निर्माता, यी आवश्यकताहरू सबै पूरा गर्न डिजाइन गरिएको छ जो देखि टूथपेस्ट। र यो ब्रान्ड को उत्पादनहरु को लाइन मा उत्पादन वयस्क र बच्चाहरु दुवै लागि छ।
ब्रान्ड 1925 मा जर्मनी उत्पत्ति। बिस्तारै विकास र युरोपेली बजार विजेता, लगभग 50 वर्ष पछि Lacalut कम्पनी रूस आफ्नो उत्पादनहरु उद्धार गर्न थाले। तर, यसको लोकप्रियता शिखर पेस्ट "Lakalyut" को 2000s को सुरुमा पुग्यो।
एल्यूमीनियम lactate - यस्तो रोचक नाम ब्रान्ड सधैं ट्रेडमार्क Lacalut अन्तर्गत बेचिएको हरेक उत्पादनमा समावेश, घटक देखि प्राप्त गरेको छ। यो सामाग्री उत्कृष्ट विरोधी भडकाऊ गुण छ, र मौखिक mucosa र जिब्रो सफाई को लागि धेरै राम्रो छ।
आज, स्वतन्त्र तथ्याङ्क अनुसार, चिकित्सकीय र निवारक एजेन्ट को खण्ड मा बिक्री संख्या मा कुनै पनि मूल्याङ्कन टूथपेस्ट प्रसिद्ध रातो-र-सेतो लोगो को उत्पादन बिना गर्न सक्नुहुन्न। र 2011 र 2013 Lacalut ब्रान्ड मा लोकप्रिय मत को आधार मा रूस मा एक वस्तु नम्बर 1 भएको छ।
यो वर्ग सबै उत्पादनहरु दुई उपप्रकारों विभाजित छ:
वयस्कहरूको लागि टूथपेस्ट।
बच्चाहरु को लागि टूथपेस्ट।
कारण छोराछोरीको टूथपेस्ट, "वयस्क" गर्न यसको विपरीत, धेरै कम समावेश (वा सबै समावेश छैन) नाजुक तामचीनी हानि पुर्याउन सक्छ जो केही सक्रिय घर्षण पदार्थ र छ। यसबाहेक, बच्चाहरु प्रक्रिया चलिरहेको बेला पेस्ट केही रकम निल्छ सक्छ देखि दाँत सफाई को, यस्तो fluoride रूपमा घटक को उपस्थिति, न्यून पारिएको छ। पनि सबैभन्दा स्वादिष्ट crumbs सुविधा कुनै पनि हानि गर्दैन।
सबै टूथपेस्ट Lacalut
मिति Lacalut गर्न मौखिक सफाई को लागि स्वच्छता उत्पादनहरु निम्न उपभोक्ता दर्शक प्रदान गर्दछ।
«सक्रिय - तीव्र सफाई";
सेतो र मर्मत;
«मूल कालो currant, अदुवा";
2. छोराछोरीलाई लागि:
बेबी (4 वर्ष);
बच्चाहरु (4-8 वर्ष);
वयस्क पेस्ट Lacalut
"Lakalyut" - विभिन्न उद्देश्यका हुन सक्छ जो वयस्क लागि टूथपेस्ट। तर, सबै एउटा कुरा यहाँ छ: अन्तिम लक्ष्य स्वास्थ्य कायम छ को मौखिक गुहा, को मसूडों र दाँत।
"Lakalyut सक्रिय" - श्रेणी pastes घटना रोक्न tartar, को क्षय, पट्टिका। साथै, यी एजेन्ट विरोधी भडकाऊ, astringent, hemostatic, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र ताजा प्रभाव छ। प्रायजसो, यी टूथपेस्ट (पाठ्यक्रमहरु) को रोकथाम लागि प्रयोग गरिन्छ, तर केही हदसम्म मद्दत गर्न लड्न र माथि रोगहरु को अवस्थित वर्ण गर्न। "Lakalyut सक्रिय" गहन शुद्धीकरण एक धनी फोम छ र विशेष soiled तामचीनी लागि हो।
टूथपेस्ट Sensitiv शृंखला अत्यन्तै संवेदनशील दाँत सामना गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले संग, तामचीनी thinning को अवस्थामा लागू पट्टिका, पत्थर र क्षय। प्रयोगको लागि आफ्नो प्रकार को बिना सबै विरंजन उपचार पछि सिफारिस गरियो।
स्वच्छ ब्लीच - "Lakalyut" को सम्पूर्ण दायरा बीचमा सबै भन्दा ठूलो वर्ग। टूथपेस्ट सेतो पुनर्स्थापना र गम को निष्ठा अधिकतम संरक्षण र सबै भन्दा तामचीनी संग प्राकृतिक दाँत सफेदी कायम गर्न सल्लाह। तपाईं regenerating, deodorizing वा विशेष बलियो स्वाद प्रभाव संग हालतमा को एक किसिम टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ।
टूथपेस्ट Lacalut Fluor Lacalut मूल र दैनिक प्रयोगको लागि राम्रो उपयुक्त। तिनीहरूले तामचीनी remineralization बृद्धि र cavities र गम रक्तस्राव रोक्न। को रोगाणुरोधी प्रभाव गंध निर्मूल गर्न मद्दत गर्छ।
विभिन्न स्वाद संग Lacalut मात्र चिकित्सकीय र रोगनिरोधी प्रयोग छ, तर पनि एकदम प्रक्रिया सफाई दाँत diversifies। यसबाहेक, कागति capillaries मुख, बलियो र सास freshens अदुवा रोगजनकों नाश र एक एंटीओक्सिडेंट रूपमा कार्य गर्दछ, र जैतून र साग तामचीनी को विनाश रोक्न।
तपाईं आफ्नो दाँत पोलिस गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले "Lakalyut" बाट Alpin ध्यान गर्नुपर्छ। टूथपेस्ट मात्र चिल्लो तामचीनी को सतह बनाउन तर पनि यसलाई thinning देखि रक्षा र सफेदी दिन। नियमित उपयोग संग, निर्माता पट्टिका र क्षय को रोकथाम ग्यारेन्टी।
विशेष गरी मुख विशेषज्ञहरु प्रयोगशालाहरुमा विशेष गरी बलियो सुनिंनु र sores को उपचार को लागि "Lakalyut" Lacalut Fitoformula पेस्ट विकास भएको थियो। यसलाई ऋषि, स्टेटजोन्स wort, हरियो चिया, myrrh, को रक्तस्राव रोक्न र एकदम जीवाणुहरु को प्रजनन सुस्त सक्षम को अर्क मा धनी छ।
सबैभन्दा दन्त रोग रोकथाम गर्न, निर्माता टूथपेस्ट Lacalut जोडी र Lacalut Fluor जेल प्रयोग सुझाव दिन्छ। संरचना आफ्नो अधिकतम सन्तुलित, त्यसैले यी एजेन्ट पनि पाठ्यक्रम बीच एक मोहलत एक प्रकारको अन्य चिकित्सकीय उत्पादनहरु संग संयोजन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरु पेस्ट Lacalut
बेबी दाँत धेरै वातावरण र प्रभाव संवेदनशील र लुगा धुने सुविधा छन्। तसर्थ, pastes को विशेष लाइन बच्चाहरु Lacalut विशेषज्ञहरु लागि विकसित, विभिन्न उमेर समूहका लागि डिजाइन प्रत्येक:04,48 र 8 12 वर्ष देखि।
"Lakalyut" - टूथपेस्ट निर्माताहरु बच्चाहरु सबैभन्दा प्रभावकारी मात्र होइन र सुरक्षित, तर पनि खुसी स्वच्छ उत्पादनहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई ख्याल गर्ने एक ब्रान्ड। Toddlers लागि वाहन allergens समावेश छैन, तिनीहरूलाई मा fluoride को मात्रा6पटक भन्दा मा कम "वयस्क" pastes तिनीहरूले बेचैनी कारण छैन र सफाई गर्दा जल, एक सुखद स्वाद र सुगन्ध छ।
यो सायद छोराछोरीको टूथपेस्ट "Lakalyut" घमण्ड गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रक्रिया सफाई केही सम्पत्ति को अधिग्रहण पारित गर्न धेरै सजिलो भएको छ संग, बच्चा अब शाब्दिक बाथरूम Chase छ कि टिप्पणीहरू नै आमाबाबुले पुष्टि गर्नुहोस्।
Lacalut मूल्यांकन टूथपेस्ट
तपाईं अध्ययन भने कुनै पनि आधुनिक टूथपेस्ट दर्जा, तपाईं यसलाई कम्तिमा एउटा वस्तु Lacalut समावेश गर्दछ र पहिलो 3-5 रेखाहरू सबैभन्दा अक्सर याद हुनेछ। कारण एकदम सरल छ:
"Lakalyut" - धेरै साझा पेस्ट, यो सम्भव प्रत्येक ग्राहक को merits यसलाई मूल्याङ्कन बनाउँछ जो लगभग कुनै पनि स्टोर, औषधि पसल वा सुपरमार्केट, मा खरिद गर्न सकिन्छ;
आगंतुकों दर्जा को, "Lakalyut" प्रभावकारी र पूर्ण खर्च मुद्रा मिलाउँछ;
यो तपाईं समस्या को एक निश्चित प्रकारको लागि टूथपेस्ट को एक विस्तृत श्रृंखला चयन गर्न अनुमति दिन्छ;
केही अवस्थामा परिणाम तुरुन्तै पहिलो आवेदन पछि सजिलै देखिने छ।
तर, यो ब्रान्ड त्यहाँ केही बेफाइदा पनि छन्। तिनीहरूलाई बीच मुख्य - उच्च लागत र नियमित प्रयोग को नसक्नुको।
टूथपेस्ट 150 rubles देखि सुरु "Lakalyut" मूल्य, एकदम यस सन्दर्भमा, उदाहरणका लागि, हराउछ "कोलगेट" वा "मोती", त्यसैले उपभोक्ता प्राथमिकताहरू अक्सर उत्तरार्द्ध तिर दुबला। को नियमित लागि जाँदा, त्यसपछि नकारात्मक पक्ष नातेदार: Lacalut धन चिकित्सकीय सामान थप रूपमा, को दैनिक उपयोग संभावना संग धेरै pastas को दायरामा अस्तित्व बावजुद सब गर्दै हुनुहुन्छ।
समीक्षा र सल्लाह दन्त चिकित्सक
टिप्पणी र डाक्टर को सिफारिसहरू सन्दर्भमा, पर्याप्त सुवक्ता प्रायजसो, दन्त रोग विभिन्न प्रकारका को रोकथाम छ र दन्त चिकित्सक यस ब्रान्ड को टूथपेस्ट सल्लाह दिन्छन् भन्ने तथ्यलाई हुन।
प्रयोग गर्न Lacalut स्वच्छता उत्पादनहरु सकेसम्म प्रभावकारी थिए, दन्त चिकित्सक निम्न सिफारिस:
कमजोर तामचीनी र गिजा लागि नरम toothbrushes प्रयोग;
छोराछोरीको विशेष पास्ता प्राप्त;
मा दाँत र दिनमा विशेष rinses को प्रयोग को सफाई को पूरा;
उपचार समयमा मात्र स्वस्थ खाना खान;
विरंजन र घर्षण टूथपेस्ट दुरुपयोग;
सानो परिवर्तन र बेचैनी स्वास्थ्य र दाँत र मौखिक mucosa को निष्ठा सम्बन्धी ध्यान।
सही टूथपेस्ट छानिएन र राम्ररी दैनिक हेरविचार ठूलो सेतो मुस्कान प्रदान गर्न सक्छन्। र त तपाईं दन्त चिकित्सक गर्न बारम्बार भ्रमणमा जोगिन सक्षम हुनेछ - यो आधारभूत नियमहरू सम्झना र केही केही सरल निवारक प्रक्रियाहरु पालना गर्न मात्र महत्त्वपूर्ण छ।
Pulpitis: यो र कसरी यो व्यवहार के छ?
Hypoplasia तामचीनी: निदान र उपचार
किन दाँतको दुखाइको ताकत बिना?
दन्त चिकित्सा "सबै आफ्नो": सबै भन्दा राम्रो सिफारिसहरू रूपमा समीक्षा
Sinusitis संग घ्यु रस: घर मा प्रयोग
मन को शक्ति - धेरै सक्षम छ।
Aortic काठिन्य र यसको परिणाम
Zaha खनिज: वास्तुकला। जीवनी र व्यक्तिगत जीवन Zaha खनिज,
प्रशासन साइटबाट लुकाउन आईपी-ठेगाना
प्रति शिक्षक समूह पूर्वप्राथमिक विशेषता मा बच्चा
फैशन Outventure: समीक्षा
वास्तवमा मिश्र एउटा यात्राको लागि कार्य को पासपोर्ट को अवधि के हो?
TRX - यो के हो? को TRX संग अभ्यास को सेट
कपालको टुक्रा: प्रशंसा गरिएका महिलाहरूको समीक्षा
"वेटिकन रेकर्ड्स।" आलोचना